Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Canada kwuputara mgbatị mmachibido ụgbọ elu si India
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Canada kwupụtara mgbatị mmachibido ụgbọ elu si India
Ka Canada na -akwado maka ịlaghachi ụgbọ elu si India na Canada, Transport Canada na -ekwupụta mgbatị nke Ọkwa na Airmen (NOTAM) nke na -egbochi ụgbọ elu azụmahịa na nkeonwe ọ bụla na -aga Canada site na India ruo Septemba 26, 2021, na 23: 59 EDT.
Ka Canada na -akwado maka ịlaghachi ụgbọ elu si India na Canada, Transport Canada na -ekwupụta mgbatị nke Notice to Airmen (NOTAM) na -egbochi ụgbọ elu si Canada si India.
A na-adụ onye ọ bụla nọ na Canada ọdụ ka ha zere njem na-adịghị mkpa na mpụga Canada-njem mba ofesi na-abawanye ohere nke ikpughe, yana mgbasa nke COVID-19, gụnyere ọrịa nke ụdị ọhụrụ kpatara.
Usoro oke na ahụike ọha na -agbanwekwa ka ọnọdụ ọrịa na -agbanwe.
Canada na-aga n'ihu na-ewere ụzọ dabere na ihe egwu wee tugharịa ókèala ka ọ na-ebute ahụike na nchekwa nke onye ọ bụla nọ na Canada ụzọ.
Ka Canada na -akwado maka nloghachi nke ụgbọ elu si India na Canada, Transportgbọ njem Canada na -ekwupụta mgbatị nke ọkwa na Airmen (NOTAM) nke na -egbochi ụgbọ elu azụmahịa na nkeonwe na -aga Canada site na India ruo Septemba 26, 2021, na 23:59 EDT.
Ozugbo mmachi ụgbọ elu na -akwụsị, ndị njem ruru eru ịbanye Canada ga -enwe ike ịbanye ụgbọ elu si India na -aga Canada yana usoro ndị ọzọ:
Ndị njem ga-enwerịrị ihe akaebe nke nnwale mkpụrụ ndụ COVID-19 na-adịghị mma site na nke akwadoro Ụlọ nyocha Genestrings n'ọdụ ụgbọ elu Delhi ewepụtara n'ime awa iri asatọ na asatọ nke njem ụgbọ elu ha mere na Canada.
Tupu ịbanye, ndị na -ahụ maka ikuku ga -enyocha nsonaazụ nnwale ndị njem na -ahụ na ha ruru eru ịbịa Canada, na ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke ebugola ozi ha n'ime ngwa mkpanaka ma ọ bụ webụsaịtị ArriveCAN. A ga -ajụ ndị njem na -enweghị ike iru ihe ndị a chọrọ ịbanye.
Dị ka nzọụkwụ mbụ, na Septemba 22, 2021, ụgbọ elu atọ si India ga-abata na Canada, a ga-anwale ndị niile nọ n'ụgbọ elu ndị a maka COVID-19 mgbe ha rutere iji hụ na usoro ọhụrụ ahụ na-arụ ọrụ.
Mgbe ịmaliteghachi ụgbọ elu na -aga n'ihu, ndị njem ruru eru ịbanye Canada ndị na -apụ India maka Canada site na ụzọ na-enweghị isi ga-aga n'ihu na-achọ inweta, n'ime awa 72 ọpụpụ, ezigbo nnwale COVID-19 sitere na mba nke atọ-na-abụghị India-tupu ịga n'ihu njem ha na Canada.
A na-adụ onye ọ bụla nọ na Canada ọdụ ka ha zere njem na-adịghị mkpa na mpụga Canada-njem mba ofesi na-abawanye ohere nke ikpughe, yana mgbasa nke COVID-19, gụnyere ọrịa nke ụdị ọhụrụ kpatara. Usoro oke na ahụike ọha na -agbanwekwa ka ọnọdụ ọrịa na -agbanwe.
Ọrụ Robotaxi nke kwụụrụ onwe ya na Europe nke mbụ ...
Poland na -akwado ịkwalite ngalaba njem ya
Njem Nleta Anabataghị Ike Ya
Ndị njem nlegharị anya Seychelles na Emirates ụgbọ elu nabatara GCC Media
Flights na Flyr na Vueling si Milan Bergamo ugbu a
Malta mepere ndị America gbara ọgwụ mgbochi ọrịa
Club Wyndham Flynns Beach Resort okpukpu abụọ